DHAGEYSO: Qarax Khasaare xooggan geystay oo ka dhacay Muqdisho & Wararkii ugu dambeeyay +(SAWIRO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: Qarax Khasaare xooggan geystay oo ka dhacay Muqdisho & Wararkii ugu...
DHAGEYSO: Qarax Khasaare xooggan geystay oo ka dhacay Muqdisho & Wararkii ugu dambeeyay +(SAWIRO)
Muqdisho (Halqaran.com) – Ilaa iyo 30 ruux oo isugu jira askar iyo dad shacab ah ayaa la xaqiijiyay inay dhimasho iyo dhaawac ka soo gaareen gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo lagu weeraray gaadiid uu watay taliyaha qeybta booliska gobolka Banaadir, Farxaan Maxamuud Qaroole.
Qaraxan ayaa waxa uu dhacay, kaddib markii kolonyo gaadiid ah oo uu la socday taliyaha qeybta booliska gobolka Banaadir oo marayay Waddada Aada Isbitaalka Madiina isla markaana hormarta xerada ciidamada ee Villa Baydhabo.
Wararka ay helayso Halqaran News ayaa sheegaya, in qaraxa lagu dhuftay Gaariga uu saarnaa Taliye Farxaan Qaroole, kaasi oo ahaa nooca aan xabadda karin.
Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa qoraal kooban oo kas oo baxay waxaa lagu sheegay in taliyaha uu ka badbaaday qaraxa, balse uu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay.
Afhayeenka Booliska Soomaaliyeed, Gaashaanle Saadaq Aadan Cali Doodishe oo la hadlay laanta Af Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegaya, in ilaa iyo 4 ruux ay ku dhinteen 9 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaasi.
Sidoo kale, dadka qaraxaasi ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay ayaa isugu jira qaar kamid ah ilaalada Taliyaha, dad wadada marayay oo qaarkood watay Mootooyin Bajaaj iyo dad Goobo Ganacsi ku leh hareeraha wadada u dhaxeeysa Isgoyska Banaadir iyo Isbitaalka Madiina.
Si kastaba, Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyada qaraxa lagu weeraray Taliyaha qeybta Booliska Gobolka Banaadir, waxaana ay sheegeen in qaraxa ay ku dileen askar farabadan.
Halkan ka dhageyso Wareysiga Gaashaanlle: Doodishe:
Qarax khasaaro geystay
Taliye la wareeray